China DB camera steel wire intambo mveliso kunye nabenzi | Bangyi
Okwangoku, ezona ntambo zimbini zisetyenzisiweyo zeplastikhi zitywinwe zintambo zentsimbi zezi:
Igama elipheleleyo le-PU yi-polyurethane. Xa kuthelekiswa ne-PVC camera intambo yocingo lwentsimbi, ine-oyile elungileyo yokumelana, ukuqina, ukumelana ne-abrasion, ukumelana nokuguga kunye nokubambelela; Ixabiso liphezulu kakhulu, kwaye kufanelekile kubathengi abaneemfuno eziphezulu zokuqina kwemveliso kunye nokumelana ne-abrasion.
I-PU Camera Steel Rope zisetyenziswa ngokubanzi kwiintambo zokuzivocavoca, imigca yokufaka i-cannery, umgca wokuhlamba, iintambo zokhuseleko lwekhompyuter, inkqubo yokutshixa intambo, iinkqubo ze-catenary, umgca wolawulo lwemoto, isicelo se-horticultural, intambo yokutsiba, intambo yentambo yasentwasahlobo, izicelo ze-guardrail.
Kwifektri yethu, intambo yentsimbi eyenziwe ngocingo lwentambo yamkela izixhobo zemveliso ezizenzekelayo. Inyathelo lokuqala kukusonga isambatho seplastiki kwintambo yocingo. Emva koko intambo ihlolwe ngenkqubo yolawulo oluzenzekelayo ngokupheleleyo ukuqinisekisa ukuba intambo yentsimbi eyenziwe ngocingo lwesinyithi isongelwe ngokulinganayo kwaye inobubanzi obulinganayo. Emva kokupholisa emgceni, kuya kuthi ekugqibeleni kuhlolwe umgangatho. ke zipakishwe baler oluzenzekelayo ngokupheleleyo ukugqibezela yonke inkqubo yemveliso, okanye ukungena ngqo inkqubo ahlabayo oluzenzekelayo ukunciphisa ubungakanani ezincinane.
Igama lemveliso DB camera intambo yentsimbi
Izinto eziphathekayo Intambo yocingo lwentsimbi: intsimbi kwalenza / intsimbi engatyiwa 316/304/201,Ukwaleka: PU
umbala Ngaphaya, luhlaza, tyheli, bomvu, mnyama, bhlowu, mfusa, njl.
Izicelo Intambo yenqwelo moya; I-Automobile Clutch Cable, iiCandelo zoLawulo; Umnxeba wonxibelelwano, iilifti, intsimbi yocingo ephothiweyo, umsebenzi wezandla, ucingo
ukuzoba, izixhobo zombane zasekhaya kunye nezinto zokwenza imveliso, iiwotshi kunye neewotshi, izixhobo zoomatshini, izixhobo zekhompyuter, njl.
Egqithileyo Intambo yeplastikhi yocingo lwentsimbi
Okulandelayo: Intambo yePVC yentsimbi yentsimbi
Intambo yecingo ye-Electro kwalenza intsimbi, Camera Camera Intambo, China Ukwenziwa Isefu Wire Intambo, PVC Camera Isefu Steel Intambo, Intambo yocingo lwentsimbi ngesinyithi, Intambo yocingo yePvc engenazingcingo,